Fihaonana tamin’ny filoha Rajaonarimampianina : nitaky vahaolana momba ny fitsaram-bahoaka ny FFKM | NewsMada
Fihaonana tamin’ny filoha Rajaonarimampianina : nitaky vahaolana momba ny fitsaram-bahoaka ny FFKM
Par Taratra sur 25/01/2017
Noraisin’ny filoha Rajaonarimampianina teny Iavoloha, omal, ireo filoham-piangonana efatra eo anivon’ny FFKM. Ankoatra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, notaterin’ireo mpitondra fivavahana ny fehinkevitry ny komity faha-39 natao tany Toamasina. Nisongadina ireo olana samihafa eto amin’ny firenena.
« Tsy afaka ny hilaza ny votoatin’ny dinika teny aho satria eo ny filoha am-perinasan’ny FFKM tokony hanambara izany. Na izany aza, nitatitra amin’ny filoha ny fivoriana natao tany Toamasina izahay », hoy ny filohan’ny FLM, ny Rev. Rakotonirina David, omaly teny Isoraka. Anisan’ny nivoitra tamin’ny fanambaran’ny FFKM ny volana novambra teo tany Toamasina, ny momba ny mpitandro filaminana sy ny resaka fitsaram-bahoaka ary tombanana ho notsiahivin’ireto filoham-piangonana ireto amin’ny filoha Rajaonarimampianina izany sy nitakiany vahaolana koa. « Mihalehibe ny hantsana manasaraka ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Tsy hitan’ny vahoaka intsony, araka izany, ny maha tandroka aron’ny vozona ny mpitandro filaminana izay efa lasa herim-pamoretana ankehitriny», hoy ny fanambarana. Mahahenika amin’ny fiainam-pirenena manontolo ny fahalovana. Anisan’izany ny disadisa hita eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny tsy fanajana ny rafitra misy azy ireo. Tsy voaaro intsony ny vahoaka sy ny fananany, araka ny fanambarana ihany. « Tsy atokisan’ny vahoaka intsony koa ny fitsarana, ka miteraka ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa », hoy ny FFKM.
Nohitsin’izy ireo fa miaina anatin’ny fahantrana tanteraka ny vahoaka ary mibaribary ny elanelana eo amin’ny mpanankarena, nefa manan-karena ara-boajanahary ny firenena.
Hametraka lamina mialoha ny fifidianana ny FFKM
Nohitrikitrihin’ny fiangonana ny fihanaky ny kolikoly sy ny momba ireo vahiny. « Miharihary ihany koa ny gaboraraka amin’ny fitantanana ny harem-pirenena, ka lasa tantely afa-drakotra ny harena an-kibon’ny tany. Ny olom-bitsy sy ny vahiny sisa mahazo tombontsoa amin’izany. Manjaka sy mahahenika amin’ny sehatra rehetra ny kolikoly, ary tsy misy fangaraharana amin’ny fitantanana ny fanampiana voaray avy any ivelany izay lasa gaboraraka sy tsy hita ny fiantraikany », hoy ihany ny FFKM.
Tsy voahaja koa ny soatoavina demokratika, ary tsy afa-miteny an-kalalahana amin’ny haino aman-jery intsony ny vahoaka sy ny mpampita vaovao, araka ny fanambarana. Tsy ampy koa ny ezaky ny fanjakana, ka tokony hampitomboana izany amin’ny fitandroana ny aina sy ny fampiharana ny lalàna ho an’ny olon-drehetra.
Ankoatra ireo, tombanana fa noresahina ny fampihavanana. Miketrika ny hametraka lamina politika mialoha ny fifidianana rahateo ny FFKM. « Mba hirindra sy hilamina ny raharaha politika. Ilaina ny filaminana mialoha ny fifidianana », hoy izy ireo teny Vohipiraisana, afakomaly.
Araka izany, nihaino sy hitady vahaolana momba izany ny mpitondra ?